कुलमान भन्छन्- अब लोडसेडिङ तालिका आउँदैन्, बरु जेल जान्छु तर जनतालाई बिजुली दिन्छु - Sudur Khabar
महाकाली नदीमा आधा दर्जन पुल बन्छन्ः भारतीय राजदूत राय अझै राहत पाएनन् दौड तोलेनीका बाढीपीडितले २५ क्षमताको कारागारमा ४८ जना कैदी ! ममताको उपचारका लागि १० लाख ३५ हजार रुपैयाँ सहयोग राष्ट्रपतिको छोरीको हातमा सुनैको बाला ! हिराजडित औँठी, घाँटीदेखि सिउँदोसम्म गहनैगहना ! कुलमान भन्छन्- अब लोडसेडिङ तालिका आउँदैन्, बरु जेल जान्छु तर जनतालाई बिजुली दिन्छु
प्रकाशित मिति: November 12, 2016
काठमाडौं, २७ कात्तिक । नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा प्रमुख कुलमान घिसिङले अब लोडसेडिङको तालिका नआउने घोषणा गरेका छन् ।
काठमाडौं उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त बनाएर चर्चामा आएका घिसिङले हिमालय टेलिभिजनको यक्ष प्रश्न कार्यक्रममा पत्रकार नारायण पौडेलसँगको कुराकानीमा भने– ‘लोडसेडिङ तालिका अब आउदैन । तालिका प्रकाशित गरेर किन आतंक सृजना गर्ने ? अब लोडसेडिङ हुनै नदिने ।’
घिसिङले उर्जा मन्त्रालयबाट नागरिकताको आधारमा मिटर–बक्स जोडि दिने निर्णय गराएको कुरा सार्वजनिक गर्दै भने– ‘घर बनाउन दिने, मिटर–बक्स नदिएर अध्याँरोमा राख्ने ? यो मिल्दैन । मिटर–बक्स दिन्छौँ, बरु त्यसबापत जेल जान परे पनि जान्छौँ ।’
हिउँदमा केही मात्रामा लोडसेडिङ हुनसक्ने भन्दै उनले भने– ‘जाडोको चिन्ता हो । पिक आवरमा उद्योग नचलाएमा लोडसेडिङ हुँदैन । जेठपछि त लोडसेडिङ हुँदैन भनेर लेखेर दिन्छु, परीक्षणमा भएकाले अहिले चाहीं मुखले मात्र भन्छु ।’
उनले लोडसेडिङसँगै विद्युत प्राधिकरणबाट दिइने सेवालाई पनि चुस्त बताउने बताए । ‘अब विद्युत महसुल बुझाउँदा लाइन बस्नुपर्दैन् । सबै कुरा सिस्टममा हुन्छ । ग्राहकलाई कसरी छिटो, छरितो सेवा दिन सकिन्छ हामी त्यसमा केन्द्रीत छौं,’ उनले भने ।
महजोडी भन्छन् : धुमुर्स सुन्तलीबाट सरकारले सिकोस्
पढेका,धनिका छोरीहरु बोक्सीको आरोपमा मारिएको सुन्नुभाछ:गायक यश कुमार
एसएलसीमा ८६ प्रतिसत ल्याएर पनि १७ बर्षकै कलिलो उमेरमा आजीवन जेलको सजाय भोग्दै गरेकी मेरिना संगको कुराकानी
पिसाब फेर्दा सबभन्दा धेरै मज्जा आउँछ:ज्योती मगर